Uhlu lwami Lokuhlola Ukubhuloga ... | Martech Zone
Uhlu lwami Lokuhlola Ukubhuloga…
NgoMsombuluko, Mashi 10, 2008 ISonto, Ephreli 24, 2016 Douglas Karr
Ngesonto eledlule ngibe nekhofi noBrandon McGee, oyi-VP enebhange laseHuntington eligxile kakhulu Mobile Banking. Ibhulogi kaBrandon inezinga elithile lenjini yokusesha enhle - ngenxa yokuqukethwe kwakhe okugxile kanye niche eqinile abhuloga ngayo.
Saxoxa ngebhulogi yakhe saze sakhuluma neselula isikhashana, wanginikeza ukuqonda okuhle ngokuthi imboni iya kuphi futhi kuyajabulisa impela. Nayi amazwibela engxoxo yethu - bengifuna ukuwabelana nawo wonke umuntu.
I-niche, i-niche, i-niche... ezincane, ezincane, ezincane. Nginomona ngokukhetha kukaBrandon kubhulogi. Ngangihlale ngiphonsa inetha elibanzi ngangizitholela izinhlanzi eziningi; kepha iqiniso liphambene nalokho. Ngoba anginayo i-niche eqinile kakhulu, ngincintisana namanye amasayithi amaningi. UBrandon akudingeki ancintisane (okwamanje). Kulabo abacabanga ukubhuloga, kunomsindo omkhulu lapha ngaphandle ngakho zama ukuthola imvamisa yakho!
Ukukhetha igama lesizinda. UBrandon njengamanje usingathwe ne-Blogger. Yilapho i- 'yet' icatshangelwa ephuzwini lami langaphambilini. Uma othile ethatha isinqumo sokubhuloga mayelana nokubhanga okuhambayo futhi abambe igama elikhulu lesizinda, uBrandon angahle adonswe phansi ekhasini lemiphumela ye-Search Engine njengoba abanye abantu bevuka ngamagama wesizinda okubhekiswe kuso.
Ibanjwe ngokubamba. Ukukhetha kukaBrandon ku-Blogger kube kuhle kakhulu ukumenza asebenze. Une-niche yakhe futhi uhlala ebhuloga ezihlokweni ezinhle. I-blog nakanjani iwine futhi imkhuthaza ukunakwa okuthile. Kodwa-ke, angicabangi ukuthi kuyamkhuthaza kakhulu ukunakwa njengoba kungaba uma ezokwengamela yena uqobo. Ukusingathwa kwepulatifomu njenge-WordPress kuzomvumela ukuba abeke ukwakheka kwakhe, enze ezinye izinjini ezinzulu zokusesha, futhi 'abe' nezithameli eziya endaweni yakhe (esikhundleni seziphazamiso ze-Blogger).
Nasi isibonelo esisodwa engisinikeze uBrandon, ukuthi okuqukethwe kwakhe kuboniswa kanjani kufayela le- serp. Uma ubheka ukuthi okuthunyelwe kwakhe nezixhumanisi kukhonjwe kanjani futhi kukhonjiswa kanjani kuGoogle, kunento ebalulekile engekho:
Qaphela zonke izincazelo zeposi? Akucindezeli kakhulu, akunjalo? Nge-WordPress, i-plugin efana ne- Konke ku-One SEO Pack ikuvumela ukuthi wenze ngezifiso izingcaphuno ezihlotshaniswa nezixhumanisi zakho ku-Google. Lokhu kukuvumela ukuthi ubhale okuqukethwe okuhlosiwe, okunothe amagama angukhiye, futhi okuphoqelelayo okuzoshayela ukuchofoza okuningi kufinyelele kusayithi lakho.
Nakhu ukuthi izixhumanisi zami zibukeka kanjani:
Angimemezeli ukuthi ngiyisikhulu se-SEO, kepha amandla okuguqula okuqukethwe okukhonjiswe ngaphakathi komphumela wakho we-Injini Yokusesha kubalulekile - zombili izinjini zokusesha, nakubantu abazisebenzisayo.
Njengoba i-ecommerce kanye nokubhanga kwabelana ngezinkinga ezifanayo zokuhambisana futhi kubonakala ngathi kuguquka kweselula, ngilangazelela ukungena kubhulogi kaBrandon ngokujula kancane. Usevele wangikhombisa kwezinye izinsizakusebenza ezinhle zomkhakha weselula.
Tags: izihloko zebhulogiUBrandon McGeeizihloko zokuqukethweigama lesizindaukubamba kuqhathaniswa nokusingathwaIbhange laseHuntingtonukubhenka okuhambayonicheinyoka
Ingabe Imfundo Iyikhambi?
Ingabe Ikhasi Lakho Lokuzikhipha Kubhaliso Libukeka Kanje?
Mar 10, 2008 ku-3: 50 PM
Ngenkathi ngivuma ukuthi i-niche iyindlela yokuhamba, ngokombono wokuqala ibhulogi ngicabanga ukuthi kuyingozi kancane.
Ngingahle ngithambekele kakhudlwana ekusakazeni inetha lami ngobubanzi obuncane bese ngilinciphisa lapho ibhulogi yami iqhubeka… ngiqopha indawo yami. Njengendlela ephephile eya empumelelweni.
Mar 10, 2008 ku-4: 43 PM
Uma bengingakwenza konke, ngingaba namabhulogi ama-4 kuye kwayi-6 - eyodwa enendawo yesihloko ngasinye. Ngicabanga ukuthi abantu bathenga ama-feed ngendlela abathenga ngayo umkhiqizo ... abazibambi isikhwama esixubekile, babamba isikhwama abasifunayo. 🙂
Lokhu kuzongivumela ukuthi ngigxile kokuqukethwe kwami ​​futhi ngiphromothe amasayithi. Inkinga ngokuhamba ngenetha elibanzi ukuthi usebenza ngempela ngokumelene nazo zonke izingcezu esezivele zilapho. Angicabangi ukuthi unikeza okuqukethwe kwakho ithuba elifanele.
Mar 11, 2008 ku-12: 35 PM
Yebo, empeleni ngibona umbono wakho. Futhi yize kuzoba nzima ngokwengeziwe ukwakha ngaphambili, kuzohlinzeka ngokukhokha okungcono ngokuhamba kwesikhathi. (Njenganoma yini ngempela)
Mar 13, 2008 ku-4: 01 AM
Siyabonga ngesikhumbuzi se-All in One SEO Pack - Ngicabanga ukuthi ngibhala ikhophi kusigaba sesihloko kusuka kokuthunyelwe ngaphansi kwe-Tags?
Izifiso ezinhle ezivela eNgilandi!
Mar 13, 2008 ku-10: 18 AM
Ngiyabonga (kusuka ngapha echibini),
Mar 13, 2008 ku-10: 25 AM
Ngiyabonga Doug! 🙂
Ngiyethemba konke okuhle nawe. Ngikufundele iBlog okwesikhashana manje futhi ngikuthola kuwusizo kakhulu, ngakho-ke ngiyabonga!
Mar 13, 2008 ku-1: 54 PM
Ngiwazisa kakhulu amazwi anomusa, Jon! Ngibe ngumuntu omatasa muva nje ngakho impendulo enjengaleyo iwumthombo omkhulu wamandla.
May 2, 2008 ku-10: 10 PM
Ngingathanda ukuthatha isikweletu, kepha i-plugin yami ye-Seesmic empeleni i-plugin ye-Sidebar ukukhombisa amavidiyo wakho wokugcina. Ngiyavuma - ngubani owake wabhala i-plugin yezimvo zeSeesmic ungungqondongqondo!
Sep 30, 2010 ku-10: 17 AM
Indatshana enhle, efingqiwe.
Ngimusha kakhulu kubhulogi futhi ngivele ngashintshela kwingqikithi ye-WordPress eyenzelwe wena ebizwa ngokuthi yi-Suffusion ene-ALL IN ONE eyakhelwe kuyo. Kuyesabeka.
Futhi ngiyabonga ngokuthunyelwe.